Nitshelwe ukuthi nizihlomise ngamazwi kaNkulunkulu, ukuthi ngaphandle kwalokhu enikuhlelelwe, konke kuhlelwe yisandla sikaNkulunkulu, nokuthi asikho isidingo somthandazo wakho oqotho noma wokunxusa – akunalo usizo. Kodwa esimweni samanje, izinkinga ezingokoqobo enibhekene nazo azinakucatshangwa yinina. Uma nje beningalinda izinhlelo zikaNkulunkulu, inqubekela phambili yenu ingahamba kancane kakhulu, futhi kulabo abangazi ukuthi ufunda kanjani kulokho abakwenzayo kuzoba khona ukungenzi lutho okukhulu. Ngakho, uma ungakwazi ukubona ngokuphelele lezi zinto, khona-ke kuzobe uhlangahlangene futhi uyisithutha ekwenzeni kwakho izinto. Uma ungasiboni isimo njengoba sinjalo kodwa ugabe ngamazwi kuphela, ngabe lokhu akulona uphawu lokuduka lolu? Ukweduka okukhulu kuyabonakala kini, kuleli qembu. Namuhla, anikwazi ukufinyelela lezo zilingo “njengabenzi bomsebenzi” noma anikwazi ukucabanga noma ukufinyelela okunye ukucwengwa okuhambelana namazwi kaNkulunkulu. Kufanele nibambelele ezintweni eziningiokudingeka uba nizenze. Okungukuthi, abantu kufanele babambelele emisebenzini eminingi okufanele bayenze. Lokhu yilokhu abantu okufanele babambelele kukho, nokufanele bakwenze. Dedela uMoya oNgcwele wenze lokho okufanele kwenziwe uMoya oNgcwele, umuntu akanandima angayidlala kukho. Umuntu makabambelele kulokho okufanele kwenziwe ngumuntu, okungaphathelene noMoya oNgcwele. Akulutho kodwa lokho okufanele kwenziwe ngumuntu, kanti kufanele kulandelwe njengomthetho, njengoba kwakulandelwa umthetho weTestamente Elidala. Yize manje kungeyona iNkathi Yomthetho, kusenamazwi amaningi afanayo neNkathi Yomthetho okufanele alandelwe, futhi awalandelwa nje ngokuthemba ukuthi uzothintwa uMoya oNgcwele, kodwa ayilokho okufanele kulandelwe umuntu. Isibonelo: Awukwazi ukwahlulela umsebenzi kaNkulunkulu ongokoqobo. Awukwazi ukuphikisa umuntu ofakazelwe nguNkulunkulu. Phambi kukaNkulunkulu, uzogcina indawo yakho futhi ungantuli. Kufanele uqoqeke enkulumweni, kanti amazwi akho nezenzo zakho kufanele zilandele izinhlelo zomuntu ofakazelwe nguNkulunkulu. Ufanele uhloniphe ubufakazi bukaNkulunkulu. Akumele uzibe umsebenzi kaNkulunkulu namazwi aphuma emlonyeni Wakhe. Awukwazi ukulingisa iphimbo nezinhloso zokushiwo nguNkulunkulu. Ngaphandle, ngeke wenze lutho okuveza ukuphikisana nomuntu ofakazelwe nguNkulunkulu. Lokhu, nokunye, yilokho omunye nomunye okufanele anamathele kukho. eNkathini ngayinye, uNkulunkulu ukhipha imiyalelo eminingi ehlobene nemithetho kanti kufanele ilandelwe ngabantu. Ngalokhu, ucindezela isimo somuntu, futhi ahlonze ubuqotho bakhe. Thatha amazwi athi “Hlonipha uyihlo nonyoko” eTestamente Elidala njengesibonelo. Lawa mazwi awasebenzi namuhla; ngaleso sikhathi, abecindezele nje okunye okusesimweni somuntu sangaphandle, ebesetshenziselwa ukukhombisa ubuqotho bomuntu bokukholwa kuNkulunkulu, kanti abewuphawu lwalabo ababekholwa kuNkulunkulu. Yize manje kuyiNkathi Yombuso, kusekhona imithetho leyo umuntu okufanele anamathele kuyo. Imithetho yakudala ayisebenzi; namuhla, kunemikhuba eminingi efanele ukuba umuntu ayenze, futhi edingekayo. Ayibandakanyi umsebenzi kaMoya oNgcwele futhi kufanele yenziwe ngumuntu.
Isikhathi eside uNkulunkulu asichithe ekhuluma futhi esho kwenze umuntu acabange ngokufunda nokukhumbula amazwi kaNkulunkulu ukuba kube umsebenzi wakhe wokuqala. Akekho onakayo ukwenza, nalokho okufanele nikwenze nakho anikwenzi, ngakho lokhu kulethe ubunzima obuningi nezinkinga emsebenzini wenu. Uma, ngaphambi kokwenza amazwi kaNkulunkulu awubambelelanga kulokho obufanele ubambelele kukhona, ngalokho ungomunye walabo abazondekayo nabalahliwe nguNkulunkulu. Ukulandela lokhu kwenza kufanele uthembeke ube qotho. Akumele uwaphathise okwamaketanga, kodwa bambelela kuwo njengemiyalelo. Namuhla awufanele ukunaka ukuthi kuzotholwa miphi imiphumela, ngamafuphi, lena indlela uMoya oNgcwele osebenza ngayo futhi noma ubani owonayo kufanele afe. UMoya oNgcwele awunayo imizwa futhi awunandaba nokuqonda kwakho kwamanje. Uma umkhubekisa namuhla. Khona-ke uzokujezisa. Uma wona kulokhu okungaphansi kwegunya Lakhe, angeke akuyeke. Akanandaba ukuthi ubambelele kangakanani emazwini kaJesu. Namuhla, uma wenza kabi uzonikwa isijeziso sokufa. Kungamukeleka kanjani ukuthi ungalandeli? Kufanele unamathele—noma ngabe kusho ukuzwa ubuhlungu obuncane! Noma ngabe iyiphi inkolo, ingxenye, izwe, noma ihlelo, esikhathini esizayo kufanele konke kubambelele kulokhu ukwenza. Akekho oxolelwe, kanti akekho ozoyekwa! Ngoba ayilokhu uMoya oNgcwele ozokwenza namuhla, kanti awanacala kubo bonke. Yize angeyona into enkulu kufanele enziwe yiwo wonke umuntu, futhi ayimiyalelo ebekelwe umuntu nguJesu, owavuswa wenyukela ezulwini. Ngabe indlela … (7) ayisho ukuthi incazelo kaJesu yokuthi ulungile noma unesono ihambelana nendlela oziphethe ngayo kuNkulunkulu namuhla? Akekho okufanele anganaki leli phuzu. ETestamenteni Elidala, isizukulwane ngesizukulwane sabaFarasi sasikholwa kuNkulunkulu kodwa ngokufika kweNkathi Yomusa abazange besamazi uJesu baphikisana Naye. Ngakho kusho ukuthi konke lokhu abakwenza kwaba yize, kwangaba yilutho, uNkulunkulu akazange akwamukele. Uma ubona kulokhu, khona-ke ngeke wone kalula. Abantu abaningi, mhlawumbe, bazilinganisile noNkulunkulu. Kunambitheka kanjani ukuphikisana noNkulunkulu, ngabe kuyababa noma kumnandi? Ufanele ukuqonda lokhu— ungazenzisi sengathi awazi. Ezinhliziyweni zabo, mhlawumbe, abanye abantu abagculiseki. Kodwa ngineluleka ukuba nikuzame nibone - nibone ukuthi kunambitheka kanjani. Lokhu kuzonqanda ukuthi abantu abaningi babe nokusola ngayo. Abantu abaningi bayawafunda amazwi kaNkulunkulu kodwa ngasese bayamphikisa ezinhliziyweni zabo. Ngemva kokumphikisa kanje, awuzwa sengathi ummese ufakwe wase ujijwa enhliziyweni yakho? Uma kungabi ukungezwani komndeni, kuba ukungaphatheki kahle emzimbeni, noma ukuhlushwa kwamadodana namadodakazi. Yize inyama yakho isindisiwe ekufeni, isandla sikaNkulunkulu asisoze sikushiye. Ucabanga ukuthi kungaba lula kanjalo? Empeleni, kudingeka kakhudlwana ukuthi abaningi abaseduze noNkulunkulu bagxile kulokhu. Isikhathi uma silokhu siqhubeka, uzoyikhohlwa, unganakile, uzowela ekulingweni, uzohlala ungaqapheli lutho, lokhu kuzoba ukuqala kokona kwakho. Ngabe lokhu kubukeka kukuncane kuwe? Uma ungakwenza kahle lokhu, uzoba nethuba lokuphelelisiwa - ukuthola ukuqondiswa umlomo kaNkulunkulu uqobo phambi kukaNkulunkulu. Uma ngabe awucabangi ukuthi lokhu kubalulekile, khona-ke uzoba senkingeni uzobe weyisa uNkulunkulu, amazwi akho nezenzo zizohlakazeka, kanti masinyane uzobe uthwelwe yiziphepho ezinkulu namagagasi anamandla. Lezi zinto kufanele ziqashelwe omunye nomunye wenu. Umuntu ofakazelwe nguNkulunkulu angeke akwehlulele, kodwa uMoya kaNkulunkulu awukaqedi ngawe, angeke akuyeke. Ucabanga ukuthi unakho konke ukuba wone? Ngakho, noma ngabe uNkulunkulu uthini, kumele uwenze amazwi Akhe, futhi ubambelele kuwo ngayo yonke indlela ongakwazi ngayo. Akuyona indaba elula le!